Izindlu e- Richfield - I-Airbnb
Izindlu e- Richfield
Duncormick, County Wexford, i-Ireland
Indlu enhle eyaqala ngo-1750, ibekwe endaweni enokuthula nephumulele, nokho ibanga elifushane nje ukusuka kuzo zonke iziza ezimangalisayo isifunda saseWexford esiseningizimu nesifunda, okubandakanya amachibi anesihlabathi amahle nemizana yokudoba, iJohnstown Castle, Hook Lighthouse, Wexford. I-Heritage Park, i-Wexford Wildfowl Reserve, kanye nohambo lwesikebhe oluya e-Saltee Islands eqhelile ngosuku olukhumbulekayo.
Ibekwe endaweni enhle yamahektare angu-2 ye-Ballymagyr Castle esohlwini, ehlehlela emuva ku-13th Century. Lezi zindawo zamaholide ezimangelengele zibuyiselwe kahle zisuka ezitebeleni zangaphambili ze-Richfield House yomlando.
Itholwe ngaphansi kwemizuzu eyi-10 yokushayela, ukuya edolobhaneni lokudoba i-Kilmore Quay, elizungezwe amabhishi amaningi angonakalisiwe anikezela ngamamayela ezindunduma zesihlabathi ezinhle kakhulu eningizimu-mpumalanga.
Idolobha elinempilo lase-Wexford, okuyikhaya lomkhosi odumile we-opera liqhele ngamamayela ayi-11.